I-square tube Factory | China Square ityhubhu Abavelisi, Suppliers
Insimbi engenasici ityhubhu yesikwere luhlobo lwentsimbi ende enomngxuma. Ngenxa yokuba icandelo lisisikwere, libizwa ngokuba ityhubhu yesikwere.
Iityhubhu zesikwere ezilungiselelweyo ezineenkcukacha ezahlukeneyo
Ikwaziwa ngokuba isikwere kunye noxande epholileyo icandelo intsimbi, ekubhekiselwa kuyo ityhubhu square kunye ityhubhu rectangular, amagama ekhowudi f kunye j ngokulandelelanayo.
Umbhobho wesikwere owenziwe ngesinyithi luhlobo lombhobho wentsimbi wecandelo lomngxuma wesikweri onombhobho wecandelo lesikweri kunye nobukhulu owenziwe ngomtya oshushu okanye obandayo oqengqelekayo okanye igalvanized coil emva kokugoba okubandayo kunye nokwenza, kwaye emva koko ukuwelda okuphezulu-frequency, okanye umbhobho owenziwe ngegalvanized square. wombhobho wentsimbi obandayo owenziweyo ngaphambili kunye ne-galvanizing yediphu eshushu.
Iityhubhu ezahlukeneyo ezishinyeneyo ezisikweri zilungelelanisiwe
Ngokwenkqubo yemveliso, iityhubhu zesikwere zahlulwe zaba ziityhubhu zesikwere ezingenamthungo ezishushu-eziqengqelekayo, iityhubhu zesikwere ezibandayo ezitsalwa ngokubanda, iityhubhu zesikwere ezingenamthungo kunye netyhubhu edityanisiweyo yesikwere.
Umenzi wemibhobho etyebileyo enezikwere
Njengoko igama libonisa, umbhobho wesikwere luhlobo lohlobo lombhobho wesikwere. Izinto ezininzi zinokwenza umzimba wombhobho wesikwere. Isetyenziselwa injongo kwaye phi. Uninzi lwemibhobho yesikwere yimibhobho yentsimbi.
Indawo yokuthengisa ityhubhu enkulu yecaliber rectangular
Njengemibhobho yokuthutha ioli, irhasi yendalo, irhasi, amanzi kunye nezinye izinto eziqinileyo. Xa kuthelekiswa nentsimbi eqinileyo efana nentsimbi ejikelezayo, umbhobho wentsimbi unokugoba okufanayo kunye namandla okujikeleza kunye nobunzima obulula. Yintsimbi yecandelo loqoqosho.
Q345B eludongeni olungqingqwa lombhobho wesiqinisekiso somgangatho
Umbhobho otyebileyo otyebileyo osisikwere luhlobo lombhobho wentsimbi ongqindilili ongqindilili kunye necandelo lesikwere elinomgongxo, okwaziwa ngokuba yiprofayili yentsimbi ebandayo. Yintsimbi yecandelo elinobume becandelo lesikwere kunye nobukhulu, olwenziwa nge-Q235 eshushu-eshushu okanye i-coil-rolled strip okanye i-coil njengento esisiseko, ukugoba okubandayo kunye ne-high-frequency welding.
Q345B umenzi ityhubhu yesikwere uqinisekisa umgangatho
Ukuqinisekiswa komgangatho we-alloy square tube factory enkulu
Umbhobho wesquare ongenamthungo ngumbhobho wentsimbi yesikwere oneekona ezine. Ingumbhobho wentsimbi yesikwere owenziwe ngumzobo obandayo kunye nokukhutshwa kombhobho wensimbi ongenamthungo. Kukho umahluko obalulekileyo phakathi kombhobho wesikwere esingenamthungo kunye nombhobho odityanisiweyo wesikwere. Umbhobho wentsimbi unecandelo elinomngxuma kwaye usetyenziswa ngokubanzi njengombhobho wokuhambisa ulwelo.
Q235 ityhubhu yesikwere enomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi
I-Q235 i-welded square pipe yi-appellation ye-square pipe, oko kukuthi, umbhobho wentsimbi kunye nobude becala elifanayo. Yenziwe ngentsimbi yentsimbi eqengqelekayo ngesisombululo setekhnoloji. Ngokuqhelekileyo, intsimbi ye-strip ayipakishwanga, icwecwe, igobile kwaye idityaniswe ukuze yenze umbhobho ojikelezayo, kwaye ke umbhobho ojikelezayo ujikelezwe ukujonga umbhobho we-square we-Q235 odityanisiweyo, kwaye emva koko unqunywe ubude obufunekayo.
Umgangatho ophezulu wentsimbi yesikwere ityhubhu
Insimbi engenasici ityhubhu yesikwere luhlobo lwentsimbi ende enomngxuma. Ngenxa yokuba icandelo lisisikwere, libizwa ngokuba ityhubhu yesikwere. Inani elikhulu lemibhobho lisetyenziselwa ukuthutha ulwelo, njengeoli, igesi yendalo, amanzi, igesi, umphunga, njl.